I-Cutting-Edge Technologies - I-CESE2 (Thailand) CO., LTD
I-BIM Technology Center inolwazi olunothile ekwakheni imodeli ye-BIM, ukuklama imidwebo yokwakha ngokusebenzisa isoftware ye-BIM, ukuthola ukushayisana kwepayipi nokusiza ukufakwa nokwakhiwa kwesiza, kusebenza nobuchwepheshe be-BIM ekusetshenzisweni nasekulawulweni kwamaphrojekthi amakhulu , njengokuphathwa kwezinto ezisizayo, ukubikezela izindleko, ukumbumbuluzwa kokwakhiwa nokunqunywa kwamapulani, izingxenye ezenziwe ngaphambilini, kuthuthukisa kakhulu ikhwalithi yephrojekthi.
Ngokukhula kobuchwepheshe bokulingisa ikhompyutha, ukulingiswa kwegumbi elihlanzekile lokusabalalisa umoya sekuvele njengobuchwepheshe obunqamulelayo emkhakheni wokwakha wobunjiniyela. Iqembu lobuchwepheshe leCFD lenze ukulingisa kwe-analogue ekusatshalalisweni komoya okuhlukahlukene, amazinga okushisa nomswakama wezindawo ezimile nezishukumisayo zendlu ehlanzekile ngokwamukela isoftware yeCFD, futhi sekuthuthukile, kuhlinzeka ngosizo lobuchwepheshe kwezentengiso nokwakhiwa kweHVAC.
Ukuqinisekiswa kwe-GMP kuyisixhumanisi esibalulekile sefektri eyenza imithi ukuthola ilayisense yokusebenza ngemuva kokuphothulwa kwamaphrojekthi. Njengokukhishwa kwenguqulo entsha yamazinga wekhwalithi we-GMP ne-GSP, iChina iqinise ukulawulwa kwayo nokuphathwa kwezidakamizwa, futhi kunzima kakhulu ezimbonini ezenza imithi ukwedlulisa ukuqinisekiswa kwe-GMP. Ukuze unikeze izinsizakalo ezingcono kumafektri enza imithi, inkampani yamisa isikhungo sokuqinisekisa se-GMP ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokuqinisekisa kumafektri ezenza imithi, futhi ibasize baphrojekthi yokuqinisekisa ukuqinisekiswa kwe-GMP ngokushelela.